Abahlinzeki be Window Screen Mesh kanye neFektri - Abakhiqizi be-China Window Mesh
Isikrini se-1.Metal wire sihlanganisa isikrini sewindows yedayimane nesikrini sewindows ye-aluminium. Isikrini sewindi le-2.Diamond mesh sakhiwe kusuka ocingweni olufakwe ngokukhethekile esinikeza amakhabethe wesimanje nawendabuko isikhalazo esimangazayo.Imestiye ezicijile ezinama-flat-wire meshes zinomklamo okhangayo. Lokhu kuvumela ukuthi kusetshenziswe kabanzi ekwakhiweni kwezangaphakathi, ama-facade wokwakha neminye imikhiqizo ehlukahlukene yezimboni. Isikrini sewindows yedayimane sinokulungiswa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, amandla aphezulu, isivikelo esihle, i-corr ...
Isikrini sewindows ephezulu enencazelo
Isikrini se-high -encazelo ephezulu iwumkhiqizo omusha owenzelwe zonke izinhlobo zemikhiqizo yokuqala yokuhlola iwindi, okuxazulula ngempumelelo ukungafani okuhlukahlukene kwemilando yesikrini sewindi lendabuko. Ngeke kuvimbele ukubona futhi kulondoloze umphumela omuhle wokufaka umoya omncane.Isikrini esinencazelo ephezulu kakhulu singavimba ngempumelelo omiyane ukuba bangene egumbini, ukudala indawo yokuphila enhle yawo wonke umuntu. Isikrini esinegama eliphakeme sinamandla amakhulu nokuqina, futhi singathwala i ...
Izikrini ze-1.Anti-haze windows zibukeka zingafani nezikrini ezijwayelekile zewindows.Kodwa ngokungafani nezikrini ezijwayelekile, lo ungqimba omncane wefilimu ugcwele izimbobo ezingabonakali ngeso le-naked.Each skwele sentimitha cishe igcwele izigidi zamasayizi izimbobo.I-pores enobukhulu bemithambo ivumela ama-molecule kuphela ukuthi adabule, ngakho izinhlayiya ezinhle ezifana ne-PM2.5 zingavinjelwa ifilimu elincanyana ngaphandle kokuthinta ukuhamba kwezakhi zamangqamuzana anjenge-carbon dioxide. Umkhiqizo ...
Isikrini sewindi le-Anti Pollen
Inqubo yokukhiqiza yesikrini sewindi le-anti impova ifaka ukucubungula, ukudweba, ukuluka, ukubumba, ukugoqa, ukuhlolwa nokufakwa kwamasilika we-polyester. Isikrini se-pollen ye-anti impova i-Material Polyester Width 1.2m, 1.4m Ubude 5m-30m Grammage 90 g / sq inombolo engu-18 * 48 Umbala Omnyama, Omhlophe, Ukufakelwa Kwamaphakethe Ufakwe Izikhwama ezalukiwe emabhokisini Izici zesikrini se-anti pollen (1) Anti impova, ukugoqa njalo, okungangeni manzi, u-anti ...